तिथि मेरो पत्रु » मा चुम्बन गर्न कसरी5सजिलो कदम
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 25 2020 |2मिनेट पढ्न
चुंबन सम्बन्धले काम हो र जब सही गरेको र सही व्यक्ति संग, यो छाती-तेज गर्न सक्छ, जादू जबडे-गिर. यस डराना लाग्न सक्छ जबकि, यो छैन. यस सजिलो चरण-चरण गाइड निम्नलिखित, तपाईं चाँडै आतिशबाजी देखेर आफ्नो बाटो मा हुनेछ.
चरण 1: एक चुम्बन शुरुवात
परिसकेको छ. सूक्ष्म संकेत छोडने, तपाईं बाहिर आउँदै र यो भन्दै बिना चुम्बन गर्न सक्छन्. एक चुम्बनले लागि सञ्चार समावेश गर्न सक्नुहुन्छ: आफ्नो मिति गरेको ओठ मा देख छोटकरीमा पकडा, अलिकति आफ्नो ओठले जुदाई, तपाईं आफ्नो मिति नजरमा मा हेर्न रूपमा कहिलेकाहीं ओठ काट संग हँसिला, वा होंठ व्याख्या / अध्या छडी र minty ताजा सास मुख kissable बनाउने. निस्सन्देह, तपाईं एक समय को लागि आफ्नो साथी संग भएको एक पल्ट, सही समय उनलाई चुम्बन गर्न छ जब अन्य लक्षण र भावनाले तपाईंलाई थाहा मदत गर्नेछ.
चरण 2: मूड सेट
एक प्रशंसा दिइएको छ जब एक चुम्बनले लागि मा झुकाव पनि sexier छ. भन्दछन् “तपाईं सुन्दर / यति सुन्दर छन्” घनिष्ठ तरिकामा जुनून amp मदत गर्न सक्छ. तपाईं तिनीहरूलाई गहिरो भावना छ कि आफ्नो मिति बताउँछ तपाईं आँखा लक रूपमा मात्रा र आफ्नो स्वर कम गरेर जबकि पनि तपाईं नजिक कदम तिनीहरूलाई लोभ्याउने.
चरण 3: किसिङ बेरियर तोड्दै
यो तपाईंको पहिलो चुम्बनले चाहे, एक नयाँ साथी संग पहिलो चुम्बनले, वा तपाईं चुंबन बारेमा अलिकति भयातुर छन्, किसिङ बाधा तोडने मात्र ती स्नायु शान्त मदत छैन तर आफ्नो रोमान्टिक मनसाय देखाउने. बरु ठूलो चुम्बनले लागि मा जाने, एक अँगालो लागि मा भरोसा र आफ्नो मिति गरेको गालामा चुम्बन. यस कदम को लागि महत्वपूर्ण नियुक्ति छ. केही सेकेन्ड लागि सुस्त जबकि कान वा मुख नजिक चुम्बन राख्दा स्पष्ट आफ्नो भावना र विचारलाई बनाउन. आफ्नो ओठ बसिरहने गर्दा तिनीहरूको कान मा अर्को बाटो खिलवाड को आदी कुरा छ कानेखुसी किसिङ बाधा हुन मदत गर्न.
चरण 4: चुम्बन लागि मा जाँदै
चुम्बन सरल. पहिलो चुम्बनले पनि धेरै जोश एक बारी-बन्द हुन सक्छ. आफ्नो ओठ धीरे छुट्टीनुभयो संग, या त एक सरल चुम्बनले रोपेर वा बिस्तारै आफ्नो मिति ओठ लक. यस कदम मा, यो आफ्नो तिथिहरु नेतृत्व पालन गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ. आफ्नो मिति जवाफ कसरी ध्यान र चुम्बनले समयमा उत्प्रेरित गर्छ. तिनीहरू भरोसा वा बसिरहने भने, तपाईं एक अधिक भावुक चुम्बनले मा कदम सक्षम हुन सक्छ. भने छैन, फिर्ता खींच गरेर चुम्बनले अन्त, आफ्नो आँखा खोल आँखा सम्पर्क गर्न, र हँसिला.
चरण 5: पोस्ट-चुम्बन Bliss
यो चुंबन प्रक्रिया को सुहागरात चरण हो. तपाईं चुम्बनले मजा आयो भने हात पकड र हँसिला माध्यम ले आफ्नो साथी देखाउन. तपाईं जारी चुंबन जाँदैछन् भने, बनाउन आफ्नो शारीरिक सम्पर्क कायम गर्न निश्चित. तपाईं पनि दृष्टिकोण कोण माध्यम ले आफ्नो चुंबन शैली स्विच गर्न सक्छन्, गति र चुम्बनले को लम्बाइ, दृढता र तीव्रता चुम्बन, र ओठ स्थिति. तपाईं एक समय को लागि चुंबन गरिन्छ भने, बस एकअर्काको आँखा मा ताक र क्षण आनन्द उठाउन.
यो तपाईं र तपाईंको मिति लागि आषा धेरै चुंबन को पहिलो छ, जबकि, यो क्षण को भावना मा मद्यपान को उत्सव मनाना महत्त्वपूर्ण छ. आफ्नो आँखा मा चमक चमक गरौं, हँसिला राख्न, र हार “तपाईं दुनिया को शीर्ष मा छौं” भावना.